musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Seychelles Kuputsa Nhau » Seychelles Pfuma: 5 Yemunharaunda Zvipo Zvekutora Kudzoka Kumba
Kupera kwerwendo kunogara kuri chikamu chakaomesesa, asi haufanire kutaura paradhiso iwe uchisiya Seychelles Islands. Iyo chitsuwa inokupa iwe yakawanda yezvipo zvekugovana nevako vaunoda kana kungo chengeta murangaridzo yako yekumwe kupukunyuka.
Kubva pane hwema, kune zvishongo, kune hunyanzvi uye nezvimwe, hakuzove nekushomeka pamusoro pehupfumi kudzosa kumba mushure mekushanya kuSychelles.
Dzakasarudzika dzakagadzirwa nemaoko zviyeuchidzo zvakagadzirwa nerudo zvinogara zvine nzvimbo yakakosha, uye zvigadzirwa zvemuno zvinogadzira zvinoshandisa zvinhu zvinopihwa nemasikirwo
Uye haumbofa wakakanganisa nechipo chinoita kuti chigarire pamarata kumba nekunakirwa kwekudya saroni, masala, sinamoni, nutmeg, uye vanilla.
Shanyira akasvibira masango anonaya uye mahombekombe ane jecha ezvitsuwa pasina kusiya imba yako nekunhuhwirira kubva kumitsara inogadzirwa yemuno. Akafuridzirwa nekunhuhwirira kwemafuta anoshamisa eSychelles, zvinonhuwira izvi zvinokunyengerera neanotyisa vanilla, inotapira-tangy lemongrass uye inodziya musky toni. Humwe hwehwehwe hwemuno hunogadzirwa kune yekare-kare mafuta ekugadzira marabhoritari mudunhu iri. Chokwadi kufadza, aya anonhuwirira anozonamatwa nehama dzako nekukutakura iwe kudzokera kunzvimbo dzinopisa.
Ratidza muviri wako rudo nezvimwe zvigadzirwa zvemuno zvakafemerwa zvemukati zvakagadzirwa iko kuno mupristine paradhiso! Yakafukidzwa nemaruva ekunze, zviwi zvine mhando yezvisikwa, zvisikwa zvakasanganiswa kuti zvigadzirise rako rese ganda rinodikanwa nemakemikari anogadzirwa munharaunda. Grainy scrubs inokutora udzokere kumahombekombe ane jecha uye exfoliate ganda rako, uye huwandu hwezvinyorovesa zvine mazano eanodziya vanilla, manyuwani egungwa munyu uye inotapira citronella kuti ipe ganda rako iro rinopenya.
Chishongo kubva mubindu reEdeni
Zvitsuwa zveSeychelles musha kune mbiri nzvimbo dzeUNESCO World Heritage, imwe yacho iri Vallée de Mai, runyerekupe kuti ndiyo imba yeGadheni reEdeni. Nzvimbo ine hunyanzvi paPraslin inogadzira dura repfuma inosanganisira yakasarudzika yeCoco de Mer chanza, inoitika kuburitsa nati hombe yepasirese, inowanira zviwi. Iwe unogona kuratidza iyi ye-ye-ye-mhando nati neku whisking imwe kana mbiri imba newe. Kuisa maoko ako paCoco de Mer kuri nyore pane zvingafungidzirwe; ingoenda kumusoro kune chero ma kiosks ari paFrances Rachel Street muVictoria, iyo Seychelles Island Foundation (SIF) kana Seychelles National Parks Authority (SNPA) uye utenge imwe yesarudzo yako, uine chokwadi chekuti inotakura chitupa chechokwadi kuratidza kuti yakawanikwa zviri pamutemo , uye haina kuiswa poached. Enda kumusoro kuNational Biosecurity Agency kuOrion Mall, Victoria kuti uve nechokwadi chekuti hauna matambudziko panhandare. Iyo inokanganisa-chiuno-chakaumbwa nzungu - yega yega yakasiyana - ndeyechokwadi kugadzira hurukuro nezvezororo rako muparadhiso.